एकराजको आफ्नै कुरा
राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) क्षेत्र नं ४ द्धारा शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) क्षेत्र नं ४ द्धारा शुभ दिपावली, नेपाल संवत तथा छठको अवसर पारेर शुभकामना तथा चियापान कार्यक्र...
COURTESY DIARY FEATURED REPORTS
युवा गायक राजेश राईले नयाँ गिती सँगालो ‘शुरुवात’ बजारमा ल्याएका छन् । एल्वममा समेटिएका सबै गीतमा उनी आफैले स्वर दिएका हुन् । एल्वममा समेट...
अफसोर दुरदराजबाट सेवा
एकराज बास्तोला पछिल्ला वर्ष नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रले ठुलो फड्को मारेको छ । प्रविधिको विकासकै कारण नेपालबाट सूचना प्रविधिको क्षेत्र...
Internet Security in Nepal
(Eak Raj Bastola)--- Guess the frequency of Nepal’“Once inablue moon”, this proverb refers to the Nepali site. Government an...
सडक विस्तार सुस्त गतिमा
एकराज बास्तोला अवस्था<br> - सन् २००९&#247;२०१० सम्ममा १०८३५ किलोमिटर निर्माण । - जिल्ला सडक तथा शहरी सडक सबै गरी २०२६४ किमी निर...
Green Signal in YSESEF
By Eak Raj Bastola Withamotive of making youth employed, Ministry of finance has established Youth and Small Enterprise Self-Em...
Dial-up: Almost obsolete
Eak Raj Bastola You could bearegular surfer on the net browsing different sites and web portals; an...
एण्टिभाइरस सुरक्षाको व्यापार
एकराज बास्तोला नेपालमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ताको वृद्धिसँगै एण्टिभाइरसको विक्री बढेको छ । कम्प्युटरमा भएका विभिन्न फाइलको सुरक्षाका लागि अनिव...
LEADERS ON CELL
As cell phone manufacturers continually evolve the technology, these hand-held devices don’t just stand asameans to communicate. Wi...
Eak Raj Bastola/Dhana Khatiwada Due to the lack ofadigitalized box office network, it has not bee...
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) क्षेत्र नं ४ द्धारा शुभ दिपावली, नेपाल संवत तथा छठको अवसर पारेर शुभकामना तथा चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ ।
क्षेत्र नं ४ का क्षेत्रीय सभापति आइते लामा (सानुभाई) को सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा
पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शमशेर जवरा, पार्टीका उच्च स्तरीय कार्य सम्पादन समितिका अध्यक्ष राजाराम श्रेष्ठ, काठमाडौँ जिल्ला संयोजक श्री जगत सागर मर्हजन, पार्टीका वरिष्ठ सल्लाहकार बाबुराम खड्का, महानगर पुर्व अध्यक्ष उमेश मास्के, किसान संगठनका महासचिव बसन्त अधिकारीलगायतका नेताको उपस्थिति रहेको थियो ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दे अध्यक्ष थापाले अव हुने चुनाव वाम पक्षधर र प्रजातान्त्रिक पक्षधर विच प्रतिस्पर्धा हुने बताएका छन् । “तपाईहरुलाई अहिले स्पष्ट कुरा आएको छ, तपाईहरुको कता उभिने भनेर” उनले भने । जनताले देश कता लैजाने भन्ने कुरा अव विचार गर्नु पर्ने बेला भएको छ । देशलाई प्रजातान्त्रिक तथा विकास तिर लैजाने कि साम्यवाद र एकतन्त्रीय तिर लैजाने यो विचार गर्ने बेला भएको छ, उनले भने ।
प्रजातान्त्रिकलाई भोट दिएमा देशलाई स्थायीत्व, उज्यालो र प्रगति तर्फ दोहोयाउने थापाले दाबी गरे । हामीलाई थ्रेसहोल्डको चिन्ता थियो केशर बहादुर विष्ट पार्टीमा प्रवेश गरेपछि हामी ढुक्क भएका छौँ, उनले खुसी व्यक्त गरे ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा बोल्दै राजाराम श्रेष्ठले देश र जनताको सेवा गर्ने प्रवित्र उद्देश्यले यस पार्टीको जन्म भएको बताएका छन् । देशको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई सबल बनाउने, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई बनाउने र जनताको पार्टीको रुपमा स्थापना गर्ने उद्देश्यको साथ यो पार्टी लागि परेको दाबी गरे ।
त्यस्तै, सभापति आइते लामाले कार्यक्रम समापन गर्दै स्थानीय तहको चुनावको नतिजालाई समिक्षा गरेका छन् । त्यति बेला पार्टीको प्रतिनिधि भए पनि स्वतन्त्र रुपमा लड्नु परेको तितो यर्थाथ पोखे । स्थानीय तहको चुनावमा तत्कालिन पार्टी अध्यक्ष कमल थापा, जिल्ला अध्यक्ष वा यस क्षेत्रका केन्द्रीय नेताले असहयोग गरेको आरोप लगाए ।
कमल थापा पार्टी जोगाउने भन्दा पनि व्यक्ति जोगाउने कुरामा केन्द्रीत भएकोले नयाँ पार्टी स्थापना भएको बताए । “अब हामी हाम्रो ठाउँ, क्षेत्रलाई उत्कृष्ट बनाएर देखाउने छौँ” उनले दाबी गरे ।
यसैगरी उक्त कार्यक्रममा यस क्षेत्रमा बृद्धा आमाहरुलाई दोसल्ला ओढाएर सम्मान गरिएको थियो ।
त्यस्तै, बृद्धलाई ढाका टोपी प्रदान गरिएको थियो ।
कपन टाइगरका उष्कृष्ट खेलाडी भाई बहिनीलाई सम्मान पनि गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा कपन टाइगरका खेलाडी भाई बहिनीहरुको आफ्नो कला कौशल प्रस्तुत गरेका थिए ।
उक्त कार्यक्रम मिलन चोक पार्टी भेन्युमा आयोजना गरिएको थियो ।
युवा गायक राजेश राईले नयाँ गिती सँगालो ‘शुरुवात’ बजारमा ल्याएका छन् । एल्वममा समेटिएका सबै गीतमा उनी आफैले स्वर दिएका हुन् ।
एल्वममा समेटिएका ५ गितमा विनय केटु, विनोद खम्वु, सुनिल बर्देवा र गायक आफैंले संगीत भरेका छन् । एल्वममा आधुनिक, पप, लोक–पप, रक गरी सबै विधाका गित समेटिएको छ ।
मन्जुश्री खराल, राजकुमार लामिछाने, सुनिल बर्देवा, जेजी राई र गायक आफैंले शब्द रचना गरेका हुन् । एल्वमको शिर्ष गित ‘तीन पानेको झोल’ को भने भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
यसअघि केहि गितहरुमा स्वर दिईसकेका गायक राईले यसपटक आफैं एकल एल्वम सार्वजनिक गरेका हुन् । उक्त एल्वमलाई ‘एसियन म्युजिक प्रालि’ ले बजारमा ल्याएको हो ।
राजेशको तीन पानेको झोलको भिडियो समेत बजारमा आएको छ । उक्त भिडियोलाई तलको लिङ्कमा गएर हेर्न समेत सकिन्छ ।
स्ववियुका लागि भर्ना
जेष्ठ ३, काठमाडौं आफ्नो पक्षमा चुनाव जिताउनको लागि विद्यार्थी नेताहरुले अवैध भर्ना गरेका छन् । यस्ता भर्ना हुने विद्यार्थी अन्य कलेज, आफन्त, पढिसकेकाहरुको पुनः भर्ना गराएका छन् । उनीहरु आफ्नो पक्षमा पकड बनाउन आफै भर्ना गराउन लागेका हुन् । पछिल्लो निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याए पनि यसपाली स्पष्ट बहुमत नआउने डरले भर्ना अभियानलाई तीब्र बनाएका हुन् । यस्ता भर्ना अभियानमा नेविसंघ, अनेरास्ववियु, अखिल क्रान्तिक्रारी लगायतका विद्यार्थी संगठन गरेका छन् । यी कतुर्त उपत्यका लगायत देशका अधिकांश क्यापसमा भईरहेको छ । राजनीतिक आडमा हुने यस्ता कार्य प्रति क्याम्पस प्रशासन भने मौन रहेको छ । उनीहरुले यस्ता कार्यलाई मौन समर्थन रहनु प्रशासनको पनि मिलेमत्तो रहने गरेको छ । । उपत्यका त्रि चन्द्र, रत्नराज्य, महेन्द्र रत्न, नेपाल कर्मश क्यापस, बानेश्वर लगायतका क्यापसमा गरीरहेका छन् । पाँच बजे बन्द हुने आर आर क्यापस स्थित नेपाल बैँक लिमिटेडको शाखा कार्यालय ८ बजेसम्म खुलेको थियो । अहिले पनि आर आर, त्रिचन्द्रका नेता कार्यकर्ताले भर्ना गरिरहेको स्रोतले बतायो ।
पैसा तिरेर कलेजहरु नतिजा आफ्नो अनुकुल बनाउँदा रहेछन्
एसएलसी दिएर बसेका विद्यार्थीहरुलाई ११ कक्षामा भर्ना गराउन आकर्षक विज्ञापन र गुणस्तरीय शिक्षाको दुहाइ दिन थालेका काठमाडौंका केही उत्कृष्ठ भनिने कलेजहरुले पैसा खर्चेकै भरमा नतिजा किन्ने गरेको पाइएको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद् (उमाशिप)ले लिने वार्षिक परीक्षामा चरम अनियमितता हुने गरेको तथ्य यसको प्रमाण हो । परिषद्ले गतवर्ष लिइएको कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा नजिता बिक्री गरिएको खुलासा भएको हो । नतिजा सार्वजनिक गर्ने क्रममा आर्थिक हिनामिना सहित नतिजा प्रकाशनमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
कक्षा १२ को परीक्षामा अनियमिता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा उजुरी परेपछि उक्त विषयमा छानविन गर्नका लागि केन्द्रका सहसचिव शेरबहादुर ढुङ्गानाको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरिएको थियो । समितिले गरेको अध्ययनले कक्षा १२ को परीक्षाफलमा चरम अनियमितता गरेको तथ्य फेला पारेको हो ।
उक्त अध्ययनमा परिषद्का कर्मचारीको संलग्नतामा उत्तरपुस्तिका अनाधिकृत रुपमा अंक थपिएको भेटिएको थियो । डिल्लीबजारस्थित ट्रिनिटी कलेजबाट विज्ञान संकायका विद्यार्थीहरुको अंग्रेजी विषयको उत्तरपुस्तिकामा प्राप्त अंकभन्दा १५ नम्बरसम्म बढी थप गरिएको छानविन समितिको अध्ययनले देखाएको छ । यसरी नम्बर थप गरिएको उत्तरपुस्तिका समितिले थप अध्ययनका लागि सिलबन्दी गरी सँर्तकता केन्द्रमा ल्याएको संयोजक ढुङ्गानाले जानकारी दिए ।
छानविन समितिले उत्तरपुस्तिका परीक्षणका क्रममा गोप्य सेटिङमा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो । यस क्रममा सम्परीक्षकहरुले सम्बन्धित कलेजका पदाधिकारीहरुसँग मिलेमतो गरी अनियमितता गरेको अनुसन्धानबाट देखिएको छ । विभिन्न प्रलोभनमा परी अनुत्तिर्ण विद्यार्थीलाई उत्तिर्ण गराउने सम्परीक्षकलाई आगामी दिनमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय केन्द्रले गरेको छ ।
उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा अनियमितता गरेको पाइएपछि उनीहरुलाई सम्परीक्षण वापत दिइएको ३० लाख रुपैयाँ समेत फिर्ता गराउन केन्द्रले निर्देशन दिइसकेको छ । कक्षा १२ को अंग्रेजी परीक्षाको उत्तरपुस्तिका संपरीक्षणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सहित २१ जना सहभागि रहेको केन्द्रको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालको उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी विश्वस्तरीय, व्यवसायीक र समय सापेक्ष बनाउने उद्देश्यले सरकारले २०४९ सालदेखि प्लस टुको पठनपाठन सुरु गरेको थियो । छोटो समयमा नै उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले निकै प्रतिष्ठा कमाएको पनि थियो । नेपालका सरकारी शैक्षिक संस्थाहरुको प्रतिष्ठा धुमिल भएको र जनताले आशा गरे अनुरुपको गुणस्तर दिन नसकेको आरोप खेपी रहेको अवस्थामा स्थापना भएको उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले सम्पूर्ण नेपालीहरुको आशाको किरण छोड्न सफल भएको थियो । तर, अहिले पदाधिकारीहरुकै कुकृत्यका कारण परिषद् बदनाम बन्दै गएको छ ।
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्कै उच्च पदाधिकारीहरुको संलग्नतामा शैक्षिक अनियमितताका घटना हुन थालेपछि शिखरमा पुगेको उमाशिपको गरिमा एकै पटक शून्यमा झरेको छ । उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्को उच्च ओहदामा कार्यरत कर्मचारीहरुको दृव्य मोहले गर्दा परिषद् बद्नाम भएको त छ नै शैक्षिक गुणस्तरमा पनि ठूलो धक्का पुगेको छ ।
आर्थिक चलखेलको केन्द्र बन्दै परिषद्
उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्मा आर्थिक अनियमितताको यो घटनो पहिलो भने होइन । परिषद्बाट हुने सामान्य काममा पनि केन्द्रका कतिपय पदाधिकारीहरुले पैसामा ¥याल चुहाउने गरेको केन्द्रकै एक अधिकारीले बताए । परीक्षा केन्द्र तोक्नेदेखि नतिजा प्रकाशन हुने समयसम्म आर्थिक फाइदाका लागि उच्च पदाधिकारीहरु नै मरिहत्ते गरेर लाग्ने गरेको परिषद्कै एक अधिकारीको भनाइ छ । ग्रामिण क्षेत्रमा प्लस टु स्वीकृत गर्नका लागि पनि लाखौको चलखेल हुने गरेको उनले बताए ।
उच्च पदाधिकारी पनि छानविनमा
परीक्षाफल प्रकाशनको क्रममा अनियमितता गरेको भन्दै राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्का अधिकारीहरुसँग गत माघ २ गतेदेखि वयान लिने काम सुरु गरेको थियो । परिषद्का उपाध्यक्ष डा. महेन्द्रकुमार मिश्र, सदस्य सचिव भीमलाल गुरुङ र कामु परीक्षा नियन्त्रक दुर्गाप्रसाद अर्यालसँग केन्द्रले वयान लिइसकेको छ । ती अधिकारीसँग लिएको वयानको आधारमा केन्द्रले कुनै पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन । उनीहरुले दिएको वयान सतर्कता केन्द्रको बैठकमा राख्ने र निर्णय गर्ने केन्द्रले बताएको छ । परिषद्को काम कराबाहीविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत उजुरी परेको छ ।
लिभरपुलले किन्यो आधा करोडमा नजिता
नयॉबानेश्वरस्थित लिभरपुल कलेजले कक्षा ११ को नजिता आफू अनुकुल बनाउनका लागि पैसाको खोलो बगाएको छ । स्थापनाकै वर्ष अप्रत्याशित नतिजा ल्याउने र चर्चित हुने महत्वकांक्षाका कारण कलेजले नजितामा मात्रै आधा करोड खर्चेको स्रोतले बतायो ।
पैसाको आडमा जे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका र शिक्षालाई व्यापार गर्न पल्केका कलेजका अधिकारीहरुले खुद्रा वस्तु जस्तै किनेर भए पनि कक्षा ११ नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । सुरुको वर्षनै उत्कृष्ट नतिजा देखाउन सके त्यसपछिका सत्रमा अत्याधिक विद्यार्थी जम्मा गर्न सकिन्छ र आफ्नो व्यापार सुरक्षित हुन्छ भन्ने गलत संस्कृतिबाट पोषित शैक्षिक माफियाहरुको चंगोलमा लिभरपुल कलेजका विद्यार्थीहरु परेका छन् ।
परीक्षाको नतिजा कुनै पनि विद्यार्थीका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । त्यसले विद्यार्थीको भविष्य निर्धारण गर्छ । कुनै पनि शिक्षण संस्थाको लागि उत्कृष्ट नतिजा उसको प्रतिष्ठाको विषय पनि हो । शिक्षण संस्थाले विद्यार्थीको उज्वल भविष्यको लागि कठिनतम मेहनतका साथ अध्यापन गराई उत्कृष्ट नतिजा ल्याउँछ भने त्यसको सह्रनानै गर्नुपर्छ । तर, लिभरपुल इन्टरनेशनल कलेजले भने यस्तो नतिजाको लागि शैक्षिक अपराध गरेको छ ।
लिभरपुल कलेजले गत वर्ष कक्षा ११ को परीक्षा दिएका कुल विद्यार्थीमध्ये ३ सय भन्दा बढी विद्यार्थी ७५ प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याएर उत्तिर्ण गराउन सफल भयो । त्यसमध्ये ८ जना देशभरका विद्यार्थीमध्ये उत्कृष्ट दशमा पारियो । लिभरपुलको यस्तो गरिमामय नतिजा कलेजको उत्कृष्ट शैक्षिक वातावरण र त्यहाँका शिक्षकको मेहनतले मात्र आएको भने होइन ।
लिभरपुल कलेजका अमूल अर्याल त्यसअघि सुकेधारास्थित वाग्मती मोडर्न स्कूलमा प्रिन्सिपल थिए । जहॉ बाग्मती कलेज पनि सञ्चालनमा छ । उनले पछि केही साथिहरुसँग मिली लिभरपुल कलेज खोलेका हुन । अर्यालको अहिले पनि बागमती कलेजसँग सौहार्द सम्बन्ध छ । अर्यालको परिषद्मा पनि उत्तिकै पहु‘च र हालिमुहाली भएको स्रोतको भनाइ छ ।
यही सम्बन्ध र पहु‘चलाई दुरुपयोग गर्दै लिभरपुलले कक्षा ११ को परीक्षाकेन्द्र परिषद्को मिलेमतोमा बागमती मोर्डन कलेजमा पार्न सफल भयो । त्यसपछि परीक्षाकेन्द्रका केन्द्राध्यक्षका लागि ३ लाख रुपैयाँ र परिषद्बाट आएका दुईजना पर्यवेक्षकका लागि डेढ लाखका दरले ३ लाख रुपैयाँ खर्चेको स्रोतले जानकारी दियो । यसबेलासम्म परिषद्का पदाधिकारीले लिभरपुलको नतिजा जसरी पनि उत्कृष्ट बनाउने र त्यसबापत लिभरपुलले ३० लाख रुपैयाँ दिने समझदारी भएको थियो । ‘यसैअनुरुप लिभरपुलका तर्फबाट अग्रिम भुक्तानी स्वरुप परिषद्का पदाधिकारीले २० लाख रुपैयाँ लिएका थिए । र बॉकी १० लाख नतिजा प्रकाशन अगावै दिने सहमति बनेको थियो’ स्रोतले भन्यो ।
एकाएक मोटो रकमले हौसिएका परिषद्का पदाधिकारले लिभरपुलको नतिजा उत्कृष्ट बनाउन भरमग्दुर प्रयत्न गरे । निर्धारित समयमै परीक्षाफल तयार पनि भयो । तर, १० लाख रुपैयॉ हात नपरी नतिजा सार्वजनिक नगर्ने अडानका कारण परिषद्को नजिता एक हप्ता पछाडि धकेलियो । उक्त समयमा पैसाका लागि बार्गेनिङ गरिएको स्रोतको भनाइ छ । लिभरपुले आफूले बाचा गरे अनुरुमको पैसा नतिजा प्रकाशन भएको तीन दिनमा दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेपछि मात्र नतिजा सार्वजनिक गरिएको स्रोतको भनाइ छ ।
यसरी परिषद् र लिभरपुलबीचको आर्थिक चलखेलबारे राजधानीका तीनवटा कलेजका प्रिन्सिपलहरुले सुइको पाए । परिषद्मा सिधा र बलियो पहुँच भएका उनीहरुले परिषद्का धेरैजसो निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न पनि सक्छन । त्यसपछि यो विषयलाई कसरी सार्वजनिक गर्ने भन्नेबारेमा तीनै जनाको बीचमा विभिन्न स्थानमा पटक पटक छलफल भयो । तर, यो विषयलाई सार्वजनिक गर्दा भविष्यमा परिषद्ले आफ्ना शिक्षण संस्थालाई समेत अप्ठ्यारो पार्न सक्ने ठानेर उनीहरुले यो विषयलाई गुपचुपमै राख्ने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानविनका आधारमा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले समाचार सम्प्रेषण गर्न थालेपछि उच्च माध्यामिक शिक्षा परिषद्ले लाज पचाउँदै राजधानीबाट प्रकाशन हुने लगभग सबै दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशन गरेर ती समाचार भ्रामक र प्रयोजित भएको भन्दै खण्डन गरेको छ । परिषद्ले उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन २०४६ अन्तर्गत परीक्षा सम्बन्धी विनियमहरु २०५५ को अधिनमा रही स्थापित मान्यता बमोजिम गोपनियतापुर्वक गरिएका काम कारबाहीका सम्बन्धमा व्यक्तिगत नाम किटान गरी समाचार प्रकाशन हुनु आफैमा दुःखत पक्ष हो भनेको छ । सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार सत्य नभएको दाबी गर्दै पानी माथिको ओभानो बन्न खोजेको छ । परिषद्का उच्च अधिकारीहरुको नाम जोडेर समाचार आएकाले आफूहरु मर्माहत भएको परिषद्को भनाइ छ ।
फ्लोरिडा पनि कारबाहीमा
उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्को निर्देशनलाई अवज्ञा गरेको भन्दै मीनभवनस्थित एभरेष्ट फ्लोरिडा कलेजलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न निर्देशन दिएपछि परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।
परिषद्को अनुगमन शाखाले उक्त उमाविले निर्देशन र नियमविपरित सञ्चालन भैरहेको ठहर गर्दै कारबाहीका लागि परिषद् पदाधिकारीहरुसँग सिफारिस गरेको थियो । परिषद्ले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनु अगाडि कानुनी सल्लाहकारसँग सुझाव समेत लिएको थियो ।
परिषद्का कानुनी सल्लाहकार सोम सापकोटाले एभरेष्ट फ्लोरिडा उमावीले नियम पालना नगरेको कुरा कागजात र स्थलगत अध्ययनबाट देखिएको बताए । अध्ययनले कलेजको सम्बन्धन खारेज वा स्थगत गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । यदी कलेजमाथि कारबाही भएमा कलेजले प्लस टु कलेज सञ्चालन गर्न पाउने छैन् । त्यसतै, स्थगत गरिएमा कलेजले दुई वर्षसम्म नयाँ विद्यार्थी भर्ना लिन पाउने छैन् । परिषद्का सचिव डम्बर कुमार बतासले प्राप्त सुझाव अनुसार कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारी दिए ।
सिद्धार्थ विद्या सदनको नाम ठाँउ सारी नै परिवर्तन नगरी एभरेष्ट फ्लोरिडा उमावीका नाममा गत जेठमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च गरी कक्षा ११ का लागि नयाँ विद्यार्थी भर्नाका लागि विज्ञापन गरिएको थियो । परिषद्ले दुबै तह एकै स्थानमा सञ्चालन गर्न पटक पटक निर्देशन दिएको थियो । तर, परिषद्का पदाधिकारीहरुले एकै ठाँउमा सारेको र नसारेको भए कारबाही भोग्न तयार भएको भनी परिषद्मा लिखित जवाफ पेश गरेका थिए । परिषद्का पदाधिकारीहरुले स्थलगत अध्ययन गर्दा सो उच्च माविका पदाधिकारीहरुले झुठो विवरण पेश गरेको भेटिएको थियो । टपनेपालन्यूज डट कमबाट
युवा शान्ति शिविर सम्पन्न
बैशाख २, काठमाडौं– --
युनेस्को युथ क्लबको आयोजनामा दोलखामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय युवा शान्ति शिविर सम्पन्न भएको छ । उक्त कार्यक्रममा सात देशका सहभागी युवाले शान्ति र द्धन्द्धमा आफ्ना भूमिका खोजेका छन् । उक्त कार्यक्रम अब भारतमा हुनेछ ।
उक्त कार्यक्रममा चीन, थाइल्याण्ड, जोर्डन, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया र नेपाल सहित ४० युवाले द्धन्द्ध र शान्ति प्रक्रियाबारे अध्ययन गरेका छन् । शिविरमा आएका विदेशका युवाहरुले द्धन्द्धको एक दशकबारे गहिरो अध्ययन गर्न चासो राखेको युनेस्को युथ क्लबका अध्यक्ष रिमेश खनालले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा सबै देशका सहभागीले आफ्नो देशको द्धन्द्ध र शान्तिबारे अनुभव सुनाएका थिए । आफ्नो देशको राष्ट्रिय पोसाक प्रदर्शन गरे भने शान्ति र द्धन्द्धबारे वृतचित्रहरु पनि प्रदर्शन गरिएको छ । सहभागीहरुले नेपाली नयाँ वर्षको अवसरमा विश्वमा शान्तिका निम्ति युवाको भूमिका रहने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरे ।
यसबारे विस्तृत विवरण केही बेरमा अपडेट हुनेछ ।
एण्टिभाइरसको बढ्दो व्यापार
नेपालमा कम्प्युटर प्रयोगकर्ताको वृद्धिसँगै एण्टिभाइरसको विक्री बढेको छ । कम्प्युटरमा भएका विभिन्न फाइलको सुरक्षाका लागि अनिवार्य भएकाले एण्टिभाइरसको विक्री बढेको हो । नेपालमा हाल वार्षिक १३ करोड रुपैयाँबराबरको एण्टिभाइरस खपत हुने आईसीटी एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सागरदेव लाखेले जानकारी दिए । लाखे सागर इन्फोसिसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संस्थापक हुन् । सागर इन्फोसिसले क्यास्परस्की ब्राण्डका एण्टिभाइरस विक्री गर्छ ।
नेपालमा अहिले दैनिक ५ सय ओटासम्म कम्प्युटर विक्री हुने अनुमान छ । त्यस्तै एउटा एण्टिभाइरसको औसत खरीद मूल्य ५ सय रुपैयाँ पर्छ । नेपालमा दैनिक ४ सय ५० ओटा एण्टिभाइरस विक्री हुन्छन् । एण्टिभाइरसको बजार वार्षिक ५० प्रतिशतसम्मले बढेको छ । तर विदेशमा वार्षिक तीन गुणासम्मले विक्री बढ्ने गरेको लाखेको भनाइ छ । पछिल्ला वर्ष स्मार्ट फोनको प्रयोगले समेत एण्टिभाइरसको विक्री बढाएको हो ।
बैङ्क फाइनान्सलगायत कर्पोरेट क्षेत्रमा सीमित एण्टिभाइरस अहिले सर्वसाधारणको पहुँचसम्म पुगेको छ । घरायशी प्रयोजनदेखि सानाठूला सबै कार्यालयलाई लक्षित गरी एण्टिभाइरस भित्रिएका छन् । यसको व्यापार पनि अपेक्षित रुपमै बढेकाले लगानीकर्ताहरु व्यवसायप्रति आकर्षित भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् । <br>
एण्टिभाइरस विक्रेताहरुबीच बढेको प्रतिस्पर्धासँगै खरीद मूल्य घट्दै गएको छ । केही वर्ष अघिसम्म प्रतिगोटा ३ हजार पर्ने एण्टिभाइरसको खरीद मूल्य अहिले ५ सय रुपैयाँसम्म पर्न थालेको छ यसले व्यापार बढाउन सहयोग पुर् याएको लाखेले बताए । हाल घरायशी प्रयोजनमा मात्र मासिक ७ हजार थान एण्टिभाइरस विक्री हुने गरेको नियोटेरिक नेपालका प्रडक्ट म्यानेजर तृष्णा तुलाधरले बताइन् । नियोटेरिक नेपालले ट्रेण्ड माइक्रो ब्राण्डका एण्टिभाइरस नेपालमा विक्री गर्दै आएको छ । अहिले पनि कर्पोरेट क्षेत्रमा एण्टिभाइरसको खपत बढिरहेको ओम्नी समूहका ईाजनीयर दीपेश न्यौपाने बताउँछन् । <br>
घरायशी तथा कर्पोरेट प्रयोजनका लागि क्यास्परस्की क्विक हिल ट्रेण्ड माइक्रो म्याकाफे इसेट जी-डाटा एभीजी विटडिफेण्डर र सिमेण्ट्रिक ब्राण्डका एण्टिभाइरस बजारमा उपलब्ध छन् । बजारमा नयाँनयाँ ब्राण्डका एण्टिभाइरस आउने क्रम पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा आगामी मङ्गलवारदेखि स्पेनिस ब्राण्ड पाण्डाका एण्टिभाइरस सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको एक्स्प्लोर एशिया प्यासिफिकका प्रबन्ध निर्देशक नीरज शर्माले बताए । पाण्डासँगै नेपाली बजारमा उपलब्ध एण्टिभाइरसका ब्राण्डको सङ्ख्या १२ पुग्ने भएको छ । <br>
बजारमा एण्टिभाइरस इण्टरनेट सेक्युरिटी तथा टोटल सेक्युरिटीजस्ता प्रडक्ट चल्ने गरेका छन् । यी प्रडक्टहरु घरायशी र कर्पोरेट क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । विश्वमा एण्टिभाइरसका धेरै प्रडक्ट आए पनि नेपालमा तीनथरी प्रडक्ट बढी विक्री हुने गरेको छ । नेपालमा एण्टिभाइरसको विक्री शुरु भएको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ ।
एण्टिभाइरसका विक्रेताहरुले बजारहिस्सालाई लिएर आआफ्नै दाबी गरेका छन् । घरायशी प्रयोजनमा बढी विक्री हुने क्यास्परस्कीको बजारहिस्सा ८० प्रतिशत भएको सागर इन्फोसिसका प्रबन्ध निर्देशक वासुदेव लाखे बताउँछन् । यसले सन् २००७ बाट नेपालमा क्यास्परस्की ब्राण्डका एण्टिभाइरसको विक्री शुरु गरेको हो । सागर इन्फोसिसले यो वर्ष बजारहिस्सा ८५ प्रतिशत पुर् याउने लक्ष्य लिएको छ ।
म्याकाफेका घरायशी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एण्टिभाइरसको बजारहिस्सा २० प्रतिशत रहेकॊ फिनिक्स ट्रेडिङका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राहुललाल श्रेष्ठले बताए । फिनिक्स ट्रेडिङले म्याकाफेका एण्टिभाइरस विक्री गर्छ । क्विक हिल एण्टिभाइरसको बजार हिस्सा ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको एक्शन प्वाइण्ट नेपालका निर्देशक अशोक अग्रवाल बताउँछन् । विटडिफेण्डर एण्टिभाइरसको व्यापार अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३० प्रतिशतसम्मले बढेको तारा इण्टरनेशनल प्रालिका बिजनेश डेभलपमेण्ट म्यानेजर सम्राट आचार्यले बताए । यसरी व्यवसायीहरुको आफ्नै दाबीले नेपालमा एण्टिभाइरसको बजार आकारलाई समेत प्रभाव पारेको छ ।
एण्टिभाइरसका ब्राण्ड बढेपछि व्यापार वृद्धि गर्न विक्रेताहरुले खरीद मूल्यमा छूटसँगै विभिन्न अफर ल्याउने गरेका छन् । सागर इन्फोसिसले एण्टिभाइरस तथा इण्टरनेट सेक्युरिटी २०१२ को लिाचङ अफर ल्याएको छ । सागरले २५ सेप्टेम्बर २०११ सम्म ३० प्रतिशत छूटको सुविधा उपलब्ध गराएको छ । त्यस्तै फिनिक्स टे्रडिङले म्याकाफे एण्टिभाइरस र इण्टरनेट सेक्युरिटीको खरीदमा २५ प्रतिशत छूटको सुविधा उपलब्ध गराएको बताएको छ ।
सस्तो मूल्यमा खरीद गर्न सकिने भएपछि पाइरेटेड एण्टिभाइरस चलाउनेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ । उपभोक्ताहरुमा चेतनाको विकास हुँदै गएकाले पाइरेसी घटेको हो । पाइरेटेडभन्दा आधिकारिक रुपमा ुसिरियल कीु लिएर प्रयोग गर्दा कम्प्युटरमा भएको फाइल सुरक्षित हुन्छ । सिरियल की प्रयोग नगरी एण्टिभाइरस इन्ष्टल गर्न नसकिने हुँदा पाइरेटेड गर्न सकिँदैन । सिरियल की लिँदा कम्प्युटरमा केही समस्या आए आधिकारिक व्यक्तिले नै त्यसको समाधान गरिदिन्छन् । तर वेबसाइटहरुबाट निःशुल्क डाउनलोड गर्ने सुविधाका कारण समस्या देखिएको हो ।
कुनै पनि एण्टिभाइरसले शतप्रतिशत भाइरस हटाउन सक्दैन । कम्प्युटरमा दैनिक नयाँनयाँ भाइरस देखा परिरहेका हुन्छन् । यस्ता भाइरसको पहिचान गर्नसमेत एण्टिभाइरसको अपडेट गरिरहनुपर्ने प्रबन्ध निर्देशक लाखे बताउँछन् । एण्टिभाइरसको नियमित अपडेट गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । कुनै एण्टिभाइरस इन्ष्टल गरेको दिन वा पछिल्लो पटक अपडेट गरिएको दिनसम्म मात्र डाटाबेस सिग्नेचर रहन्छ । तर इण्टरनेट ई-मेल सीडी र पेनड्राइभ नियमित प्रयोग गर्नेले अपडेट गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्ता सामग्री प्रयोग नगर्नेले एण्टिभाइरसको अवधि रहुाजेल अपडेट नगर्दा पनि फरक पर्दैन । सामान्यतः एण्टिभाइरसको अवधि १ वर्षको हुन्छ । अपडेट गरिरहँदा कम्प्युटरमा पूर्णसुरक्षा हुने गर्छ ।
के हो एण्टिभाइरस
एण्टिभाइरस एकप्रकारको सफ्टवयेर हो । यो सफ्टवेयर कम्प्युटर नोटबूक तथा मोबाइलमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसलॆ कम्प्युटर नोटबूक तथा मोबाइलमा भएका विभिन्न प्रकृतिका भाइरसलाई चिन्ने हटाउने र त्यसबाट बचाउने काम गर्छ । एण्टिभाइरस सफ्टवेयरले भाइरस स्पाम ट्रोजन हर्ज स्पाइवेयर एडवेयरलगायतका आक्रमणबाट कम्प्युटर फाइल वॆबपेज ई-मेल म्यासेाजर स्क्रिप्टहरुलाई संरक्षण दिन्छ । <br>
RTDF only in Pilot Project
By Eak Raj Bastola
Though the Rural Telecommunications Development Fund (RTDF) has collected the 5.18 billion from the Telecommunication and Internet Service Provider for the development of this sector, it has not use the money for the development of this sector.
Out of 5.18 billion funds in RTDF, 2.5 million in Pilot Project and some 265.6 million has only been granted to Nepal Telecom. The regulator has not been able to use the fund to increase access to telecommunication services in rural areas due toalack of coordination between governments.
Currently, RTDF is operating Internet and Telephony service as Pilot Project asacommon service centre (CSC) in Lamjung’s5V.D.C Gilung, Borletar, Tarkungghat, Baglungpani, Khudi influencing 1100, 800, 600, 300, 300 students respectively.. In each VDC’s RTDF have granted5lakhs rupees for Scanner, Fax-machine, Printer,2set computers, headphones, WebCam. The project slogan is “Connect School, Connect Community”. After the successful implementation of CSC in Lamjung, RTDF is planning to lauch in other places too, Former-member, Reg Bhahadur Bhandari, said.
“If the RTDF fund is used, it will makeabig change in Information Technology”, Bhandari shared. The government was planning to use the fund for constructing optical fiber network aiming at connecting all districts headquarters under the District Optical Fiber Network project by 2014. However, Nepal Telecommunication Authority has informed to active RTDF fund soon. RTDF has to invest in infrastructure sharing, resource sharing that can be used all the telecommunications provider of Nepal. Single BTS can be used to different operator for the data transmission. “It will minimize the cost on infrastructure”, Bhandari suggested”.
RTDF fund is operated by the two percent payment of the total annual income by the Telecommunications firms and ISPs as specified by the Article (30)4of the Nepal Telecommunication Act Fund can be disbursed Telephone (wired or wireless), mobile, internet or internet telephony services in the rural areas or developing and expanding telephone and mobile services in areas where the existing telephone services are insufficient, Bhandari told to TNP. RTDF grants loan or assistant is provided on the competitive basis and delivered inaphase wise manner only after receiving evidence that the processes mentioned in the work schedule has been carried out.
Copyright © एकराजको आफ्नै कुरा. Created By